RealYourBrainOnPorn (@BrainOnPorn) သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအထူးသဖြင့် Pornhub - Your Brain On Porn ကိုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးသည်။
RealYBOP တွစ်တာ (@BrainOnPorn) နှင့် realyourbrainonporn.com အားဖြင့်ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်တီထွင်ခဲ့သည် နီကိုးလ် Prause နှင့် ဒံယလေသ Burgess သင်၏ ဦး နှောက်ကို Porn၊ Gary Wilson နှင့်တိုက်ခိုက်ရန် အခြားမည်သူမဆို အဘယ်သူသည်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းဝေဖန်သို့မဟုတ်ထောက်ပြသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု၏ဆိုးကျိုးများ.
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောတရား ၀ င်အရေးယူမှုများကြောင့် YBOP သည်မည်သည့်အရာကိုကောက်ယူရမည် @BrainOnPorn tweets ။ ဤစာမျက်နှာကို RealYBOP တွစ်တာပထမနှစ်ကိုမှတ်တမ်းတင်သည်, နှင့်တရားဝင်ဖြစ်စဉ်များ၊ အသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် RealYBOP Twitter စသည့်အခြေအနေများနှင့်အဖြစ်အပျက်များကိုပံ့ပိုးပေးသည့်ကျယ်ပြန့်သောနိဒါန်းပါ ၀ င်သည်။ RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူများက ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းမှပေးဆောင်(၂၀၂၀၊ Aprilပြီ ၁၇ ရက်မှ စ၍ BrainOnPorn ၏ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတွစ်တာများအကြောင်း @ BrainOnPorn ၏စာမျက်နှာကိုမှတ်တမ်းတင်).
စဉ် ဒံယလေသ Burgess သည် RealYBOP URL (www.RealYourBrainOnPorn.com) ၏နောက်ဆုံးလူသိများသောပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ Nicole Prause သည် RealYBOP ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်တွစ်တာအကောင့်ကို ဖန်တီး၍ လည်ပတ်သည်။ @ BrainOnPorn ၏ ၁၈ လကြာအကြမ်းဖက်မှုအုပ်ချုပ်မှု တွစ်တာကိုအမြဲတမ်းပိတ်ပင်ခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည် ပစ်မှတ်ထားနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်၎င်း၏သားကောင်များပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ပို့စ်တင်သည်။ ဒီတစ်ချိန်တည်းလောက်မှာ YBOP သည် www.RealYourBrainOnPorn.com ကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုဖြေရှင်းခြင်းတွင်ဝယ်ယူခဲ့သည်.
RealYBOP သည်ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများအကြောင်းပြောဆိုသောသူတို့ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုကိုအမြဲတစေပြုလုပ်ခဲ့သည် (ပထမနှစ်တွင်ထိုကဲ့သို့သောတွစ်တာ ၈၀၀ ကျော်) ။ ဘယ်သူ့မှာတရားဝင်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိချင်တယ် @BrainOnPorn's ကိုအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်? အဲဒါပဲ နီကိုးလ် Prauseသို့မဟုတ် ဒံယလေသ Burgessဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုစလုံး? ဒါမှမဟုတ်အားလုံးနိုင်ဘူး RealYBOP "ကျွမ်းကျင်သူများက" တရားဝင်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးအရတာဝန်ရှိပါသလား
နီးနေစဉ် တိုင်း "RealYBOP" tweet ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုထောက်ခံသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတွစ်တာများသည် RealYBOP ၏သစ္စာရှိမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ၊ အထူးသဖြင့် PornHub (အထူးသဖြင့် PornHub)MindGeek).
PornHub သည် RealYBOP ၏အပျိုတင်တွစ်တာကိုပြန်လည် retweet လုပ်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးအကောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်! ဤသည်မှာနောက်ကွယ်မှ RealYBOP နှင့်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်း (Mindgeek) အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ထင်ရှားသောသက်သေသာဓကဖြစ်သည်။
ဒါဟာ Prause နှင့်ရှင်းပါတယ် ဒါဝိဒ်သည် Ley အများအပြားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းနှင့်အတူ chums ဖြစ်ကြသည်။ ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုဖြန့်ချိရေးနှင့် Prause ၏ပုံမှန်ပစ်မှတ်များကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းတို့ဖြင့်နောက်ကွယ်မှဆက်သွယ်မှုရှိသည်ဟုသံသယရှိကြသည်။ ဒါ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ XBIZ hit-piece RealYBOP ၏ buddy Gustavo Turner မှ RealYBOP (Prause မှလည်ပတ်သည်) သည်ပူးပေါင်းနေသည်ကိုသက်သေပြနေသည်။ တိုက်ရိုက် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူ: XBIZ ဆောင်းပါးတွင် RealYourBrainOnPorn သည် YBOP နှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်လည်မှုများအတွက်၎င်းတို့၏ရင်းမြစ်ဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ XBIZ က YBOP သည်“ ရန်ပုံငွေရှာခြင်း” ဖြစ်သည်ဟုဆိုထားသည်။ စင်ကြယ်သော bullshit, ငါ 10 နှစ်ကြာဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ YBOP ရန်ပုံငွေသို့မဟုတ်ကြော်ငြာဝင်ငွေရရှိသွားသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်မှရရှိသောကျွန်ုပ်၏ဝေစုသည်လှူဒါန်းမှုသို့သွားသည်။
XBIZ / RealYBOP ၏အဆိုအရ YBOP သည်“ သိပ္ပံပညာနှင့်မကိုက်ညီသော” ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါ အဓိက YBOP သုတေသနစာမျက်နှာ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောများပြားလှသောဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြသည့်လေ့လာမှုပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အဖြစ်မှန်၌၊ ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည် RealYBOP သည်သိပ္ပံပညာနှင့်မကိုက်ညီသော“ အဖွဲ့အစည်း” ဖြစ်သည်။ ဤစာမျက်နှာကို RealYBOP ၏သုတေသနစာမျက်နှာဟုချယ်လှယ်ထားသောမကြာခဏဆီလျှော်သောစာရွက်စာတမ်းများ (များစွာသောအမှန်တကယ်လေ့လာမှုများမဟုတ်ပါ)၊
RealYBOP porn ထုတ်လုပ်သူ (https://www.provillain.com/) နဲ့အလွန်ပျူငှါနွေးထွေးသောဖြစ်ခြင်း:
RealYBOP သည် Xhamster ချည်နှောင်ခြင်းကိုချိတ်ဆက်သည် (ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၈ တွင်) Prause သည် NoFap ၏ Alexander Rhodes ကိုရှုတ်ချသည်။ (အသေးစိတ်ကိုကြည့်ပါ။ ) ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာ: Prause သည် Xhamster နှင့်ပူးပေါင်းပြီး NoFap & Alexander Rhodes ကို smear ရန်၊ Prause သည်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည့် Hit-piece ကိုထုတ်ဝေရန် Fatherly.com ကိုသွေးဆောင်ခဲ့သည်။.)
RealYBOP Re-tweets porn ဖျော်ဖြေသူ, ( "တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက" တစ်ဦးပွတ်ဆွဲယူပြီးစဉ်) တစ်ဖန်ယင်း၏လိုလားသူ porn စက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုအတည်ပြု:
တရားမ ၀ င် ၀ က်ဘ်ဆိုက် (RealYBOP) သည်အသုံးပြုသူများအပေါ်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဟုယူဆပါကအဘယ်ကြောင့် RealYBOP သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ၀ ါဒဖြန့်ချိမှုများကိုပုံမှန်ရေးသားလေ့ရှိသနည်း။
RealYBOP (BackPage ဘို့မိမိတို့ထောက်ခံမှုမှတဆင့်) လိင်လူကုန်ကူးမှုထောက်ပံ့သလဲ? အဘယ်အရာကို BackPage အသုံးပြုသူအပေါ်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိသနည်း
RealYBOP ကျနော်တို့ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ streaming ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ပညာရေးရသင့်တယ်ခဲ့ရသည်တစ် paid porn site ကိုမြှင့်တင်
ပညာရေးနှင့်အခြားဒုက္ခများအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းအဖြစ်ပေးဆောင် porn site ကို pimping, Continues:
RealYBOP အသင်းဝင်ဖြစ်သူ Hartmann & RealYBOP သည်အမျိုးသမီးဖျက်သိမ်းရေးအတွက်တွစ်တာ ဂျူလီ Bindel နှင့်သူမ၏ဆောင်းပါး XBIZ ဆောင်းပါးကိုမြှင့်တင်ခြင်း -
ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုတိုက်ရိုက်မြှင့်တင်ခြင်း - လူသိများသော porn start နှင့်ဒါရိုက်တာ Tommy Pistol နှင့်အတူ chummy
ဆက်စပ်: RealYBOP သည်အခြားအကောင့်တစ်ခုကိုသူပိတ်ဆို့ခဲ့သည် (Laila Mickelwait) pornhub ကိုကာကွယ်ရန် (Laila Mickelwait တွင်လည်းရှိသည် Rhodes v အတွက်ကျမ်းကျိန်လွှာတင်သွင်း။ Prause)။ ဒီမှာ Laila ရဲ့လူကြိုက်များတဲ့ tweet, 1/31/20 တင်ခဲ့သည်:
Laila နောက်နေ့ကိုဆက်လက် အချက်အလက်များနှင့်စိုးရိမ်မှုများနှင့်အတူ
မည်သူသည်အသက်စစ်ဆေးခြင်းကိုဆန့်ကျင်မည်နည်း။ ၁၃-၁၄ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်များပါ ၀ င်သည့်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုဇာတ်ကားများအတွက်မည်သူမည်ဝါဖြစ်မည်နည်း။ RealYBOP ပေါ်လာတယ်။
RealYBOP သည်စနေနေ့ညတွင်သက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းခြင်းနှင့် Pornhub နှင့်အခြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအကာအကွယ်ပေးသည်။
အမြဲတမ်းလိုပဲ၊ RealYBOP သည်အဓိကအချက်များကိုရှောင်ရှားရင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ပြောသည့်အရာကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ Tweet ၏အဓိကအချက်မှာ Pornhub တွင်အသက်စစ်ဆေးခြင်းမရှိပါ။ ဘယ် RealYBOP ကအတည်ပြုပြီးသူမကြည့်တာကိုကြည့်ရင်သူမကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတွေ့ခဲ့တယ် အခြားဆိုဒ်များတွင် ID စစ်ဆေးမှုပုံစံတစ်မျိုး (သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ) ရှိနိုင်သည်မှာလုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ဒီတော့အရာရာတိုင်းဟာအဆင်ပြေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းဟာထောင်နဲ့ချီတဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့မိန်းကလေးများကိုရှာဖွေပြီးသူတို့၏အသက်ကိုထိုနည်းအတိုင်းအတည်ပြုရန်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်သင်အင်တာနက်ကိုလှည့်ပတ်ရှာဖွေလို့ရသလား။
XYBOP (လူတိုင်းကိုဆန့်ကျင်သောအစွန်းရောက်အစွန်းရောက်ဝါဒီများဟုခေါ်သည့်) ဝါဒဖြန့်ခြင်း (RealtyBOP) ဆောင်းပါး -
Fight The New မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်၍ LN သည် AVN နှင့်၎င်း၏ယုံကြည်ရသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်
Prause တာရှည်တာရှည် FTND ကိုရှုတ်ချခြင်းနှင့်နှောင့်ယှက်.
RealYBOP (Prause) သည်အထင်ရှားဆုံးသောညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုကိုပြန်လည်စုစည်းထားသည် အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း.
Prause သည် FSC နှင့်ရင်းနှီးသောသမိုင်းကြောင်းရှိသည်။
Porn စက်မှုလုပ်ငန်းမှ RealYBOP သည် FTND ကိုတိုက်ခိုက်နေစဉ် porn industry မှ XBIZ မှဝါဒဖြန့်မှုများကိုတွစ်တာပြုလုပ်သည်။
မူရင်းသတင်းအပိုင်း - https://wset.com/news/local/pornography-the-new-gateway-drug
PornHub သည်လူကုန်ကူးခံရသူများနှင့်ပတ်သက်သောဗီဒီယိုများရှိနေကြောင်းဖော်ထုတ်နေစဉ် RealYBOP သည် MindGeek ကိုခုခံကာကွယ်နေသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံနေရသည့်တိုင်မြှင့်တင်ခြင်း ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုနှင့်မုဒိမ်းမှုဗွီဒီယိုများကိုပုံမှန်လက်ခံသည်! အစဉ်အမြဲသစ္စာစောင့်သိ RealYBOP ။
Pornhub ကိုဝေဖန်သောအမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားမှုကို RealYBOP ကပြုလုပ်သည် လိင်လူကုန်ကူးမှုဗီဒီယိုများကိုငွေရှာရန်ဖြစ်သည်:
RealYBOP သည်ညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်မုဒိမ်းမှုနှင့်လိင်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများမပါရှိဟုဆိုသည်။ ဤအကောင့်ကို ဖြတ်၍ သင်၏အစာအိမ်အားဖျားနာရန်ပြင်ဆင်ထားပါ။ https://twitter.com/LailaMickelwait RealYBOP သည် pornhub ကိုခုခံကာကွယ်နေသည် !!
XBIZ မှ ၀ ါဒဖြန့်ခြင်း (PornHub ကိုကာကွယ်နေသော)
RealYBOP သည် PornHub ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများတင်ပို့ရန်အတွက်တွစ်တာအတွက် Try Crews (FTND ကိုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချနေစဉ်) ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ RealYBOP သည် Pornhub ကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့သည်။
ဇူလိုင်လ 25, 2020: RealYBOP သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းမဟာမိတ်များကို retweets Nofap အပေါ် RealYBOP တိုက်ခိုက်မှုအောက်တွင်မှတ်ချက်ပေးသည်။
RealYBOP retweets များ လိင်အလုပ်သမား "ထောက်ခံသူ" ယူပါ ကျွန်ုပ်၏ tweets တစ်ခုမှာ
Cindy Gallop ရဲ့ porn site ကိုမြှင့်တင်ခြင်း
ညစ်ညမ်းမှုကိုထောက်ခံသူများမှလေ့လာမှုများမဟုတ်ဘဲ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို PhD ၏ပေးဆပ်မှုဖြင့်အနည်းငယ်အပါအ ၀ င်)
၎င်း၏အနီးကပ်မဟာမိတ် retweeting, XBIZ:
RealYBOP တိုက်ခိုက်မှု လူကုန်ကူးမှု, Pornhub ကို porn porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုဗီဒီယိုများလက်ခံရန်တာဝန်ရှိသည်ဟူသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး (ကအစပျိုးထားသည် Laila Mickelwait).
RealYBOP / Prause ၏အွန်လိုင်းဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် Laila နှင့် Exodus Cry ကိုအသရေဖျက်မှုပြုလုပ်ပြီးလအနည်းငယ်အကြာတွင် The NY Times သည် TraffickingHub & Laila တို့၏ဖော်ပြချက်များကိုအပြည့်အ ၀ ထောက်ခံသည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်ဆောင်းပါးများကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ The Children of Pornhub - ကနေဒါသည်ဤကုမ္ပဏီအားခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့်ချေမှုန်းခြင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများကိုအမြတ်ထုတ်ရန်အဘယ်ကြောင့်ခွင့်ပြုသနည်း။. ၎င်းသည် @BrainOnPorn အတွက်အစမျှသာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဆိုက်ဘာဆက်နွှယ်ခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုအပေါ်အပြည့်အဝတိုးပွားလာသည် - အားလုံး PornHub ၏အစီအစဉ်ကိုထောက်ခံသည်။ နောက်ထပ်ဥပမာအနည်းငယ်:
Mindgeek ၏စီအီးအိုကိုခုခံကာကွယ်နေစဉ် RealYBOP သည် Laila ကိုတိုက်ခိုက်နေသည်။ မှတ်ချက် - ဒီအကောင့်ကို Mindgeek ရဲ့စီအီးအိုနဲ့မတူတဲ့အခါ RealYBOP ကလိမ်ပါတယ်။
ဤတွင် RealYBOP သည် Cry Cry ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုရန်လုံးဝပြီးပြည့်စုံသည်။
Pornhub ကိုပိုမိုအထောက်အပံ့ပြုသည် (Mindgeek သည်ငွေမည်မျှယူသည်ကိုမှတ်ချက်မပေး):
လူကုန်ကူးမှုကိုထောက်ခံအားပေးသူများမှလှောင်ပြောင်ခြင်း၊ EC ဘတ်ဂျက်တင်ခြင်းသည် pornhub နှင့်ဆက်နွယ်နေသကဲ့သို့
RealYBOP သည် Laila သည် USC သို့မတက်ရောက်ကြောင်း Tweet လုပ်ခဲ့သည်။ သူမ၏မုသားအတွက် Merritt က RealYBOP ကိုဖုန်းဆက်သည်။
RealYBOP သည်ဘဏ္sာရေးကိုတင်သည်။ RealYBOP ကပြောကြားသည်မှာလူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာအချက်အချာအသနားခံစာတွင်မှတ်သားထားခြင်းမရှိပါ။ ယောက်ျားလေး RealYBOP မှားနေတယ်။ https://traffickinghub.com/
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပြီးနောက် Merritt မှ RealYBOP ကဆက်လက်တိုက်ခိုက်သည်။
RealYBOP သည်အသရေဖျက်မှုနှင့်ပါ ၀ င်ပြီး Laila သည်အမျိုးသားများအားအမျိုးသမီးများကိုခြိမ်းခြောက်ရန်နှင့်စော်ကားရန်မှားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဖန်သားပြင် ၄ ခုကမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမှိုင်းတိုက်ခြင်းခံရမည်မဟုတ်ကြောင်း၊
Laila သည်အမျိုးသမီးပညာရှင်များစွာအားခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်ဟုအသရေဖျက်မှုပိုဖြစ်စေသည်။ screenshots များသည်အမည်မသိသောအင်တာနက်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။ Laila နှင့်ဆက်စပ်သောအဘယ်အရာကိုမျှ။
RealYBOP ကဒီအသနားခံစာကဘာမှမလုပ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါက Pornhub ကိုသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုထက်ဝက်ကျော်ကိုဖျက်စီးစေတယ်၊ ဥပဒေပြုအမတ်များသည်ဥပဒေကြမ်းများနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုအစပျိုးပေးခဲ့သည်။ RealYBOP ဘာဖြစ်သွားသလဲ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြုတ်ချခံခဲ့ရပြီး၊ twitter ကိုနှောင့်ယှက်မှုအတွက်အမြဲတားမြစ်ထားသည်။
ပိုပြီးရူးအခိုင်အမာ။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ Prause ပါတီများကတရားစွဲခံရသည်။
RealYBOP သည် Pornhub ၏လေလံများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။
obsessive cyberstalking ကတော့
စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် Laila နှင့်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များအားတွစ်တာ (၁၀) ခုတင်ပြီးသည့်နောက်တွင် RealYBOP သည်အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင်လိမ်ညာမှုများစွာဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
per se ပိုပြီးအသရေဖျက်မှု:
RealYBOP ရဲ့လိမ်ညာမှုကပိုများတယ်။ YYBOP ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်သော RealYBOP ၏တွစ်တာတွင် WIPO နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ News flash - ကျွန်ုပ်သည် RealYBOP အတွက် URL ကိုယခုပိုင်ဆိုင်ထားသည့်အတွက် WIPO သည်အရေးမကြီးပါ။ သတိပြုရန်: YBOP သည် www.RealYourBrainOnPorn.com ကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုဖြေရှင်းခြင်းတွင်ရရှိသည်။
တူညီတဲ့ပိုမုသား။ Screenshots များသည်မည်သူနှင့်မျှသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲကျပန်းအင်တာနက်မှတ်ချက်များသာဖြစ်သည်။
အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ အသရေဖျက်မှုအတွက် Prause တရားစွဲခံရသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
အခြားသူများ - ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ။ NoFap ကိုတည်ထောင်သူ Alexander Rhodes Nicole Prause / Liberos LLC အားအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုသည်။
၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာ၊ Aaron Minc, JD သည် Nicole Prause အားတရားစွဲဆိုမှုအားကြေငြာခဲ့သည်။ (Minc သည် Alex Rhodes ကိုကိုယ်စားပြုသည့်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်သည်) ။
နောက်ထပ်လိမ်လည်မှုများနှင့်ဆိုက်ဘာဆက်နွှယ်မှုများ - Laila သည်အခြားအုပ်စုများအတွက်ရန်ပုံငွေရှာခြင်းမဟုတ်ပါ (NoFap ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်မှုအတွက်တရားစွဲခံရသည်)
LOL - အခုငါ RealYBOP ကငါမမှန်သောသက်သေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ သူမဖန်သားပြင်တွင်ဥပမာများမပါရှိသော်လည်းရယ်စရာကောင်းသော်လည်း၊ Prause သည်မိမိကိုယ်ကိုလိမ်လည်ခြင်း၏ဥပမာတစ်ဒါဇင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ နီကိုးလ်ပရူးနှင့်ဒေးဗစ်လေတို့သည်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုတွင် (မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခြင်း) (စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၉၉)။ Hmm .. RealYBOP သည် Prause FBI ၏အွန်လိုင်းတိုင်ကြားချက်များကိုကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်မည်သူမျှအမည်မဖော်ပြခဲ့ပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ RealYBOP သည်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ twitter ချည်နှောင်မှုသည် Prause ၏မုသာများကိုချေမှုန်းပစ်သည်။
ပျော်စရာ - @BrainOnPorn (နီကိုးလ်ပရာ့စ်) ကကျွန်ုပ်သည် FBI ၏တောင်းဆိုချက်ကိုသူမလိမ်ကြောင်းသက်သေပြပြီးသူနှင့်ကျွန်ုပ်အားအဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်ကိုတင်ပြခြင်းအားသက်သေပြခဲ့သည်ဟုပြောသောအခါကျွန်ုပ်သည်လိမ်ပြောကြောင်းအကြိမ် ၂၀ ရေးသားခဲ့သည်
FBI က Nikky ကိုလိမ်ညာခဲ့သည်။ ဤအပိုင်းရှိ FBI မှတ်တမ်းများအားလုံး https://t.co/3R4uJMd1WQ
- ဂယ်ရီ Wilson (@YourBrainOnPorn) အောက်တိုဘာလ 7, 2020
ရုံ nuttier ရရှိသွားတဲ့:
ကျွန်ုပ်၏တရားဝင်အောင်ပွဲတွင် Prause အတုအယောင်များထပ်မံတွေ့ရှိရာတရားရုံးများကကျွန်ုပ်သည်အငြင်းပွားသူမဟုတ်ကြောင်းနှင့်တရားရုံးသည်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဖြစ်ကြောင်းတရားရုံးများကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Wilson ကတိတ်ဆိတ်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု; သူမ၏တားမြစ်မိန့်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ငြင်းဆိုခြင်းနှင့်သူသည် SLAPP စီရင်ချက်တွင်ရှေ့နေစရိတ်များစွာပေးဆပ်ရန်ရှိသည်.
RealYBOP (ယခု“ Anti-YBOP” ဖြစ်သော်လည်း @BrainOnPorn) သည် Pornhub, Avri Sapir ၏သားကောင်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း
Avri Sapir က RealYBOP ၏စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောစူးစမ်းမှုကိုတုံ့ပြန်သည်
TrueYBOP သည်နောက်လိုက်များအား Exodus Cry ကိုမစ်ဆူရီပြည်နယ်သို့သတင်းပို့ရန်ထပ်မံကြိုးစားသည် (လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က Prause ပြုသကဲ့သို့ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ။ ။ ထွက်မြောက်ရာ Cry ကိုလိမ်လည်သည်ဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ့သည်။ တွစ်တာနောက်လိုက်များကိုအမြတ်အစွန်းမယူသောမစ်ဆူရီရှေ့နေချုပ်ကို အကြောင်းပြ၍ တောင်းပန်သည် (အကြောင်းပြချက်များကြောင့်) CEO ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုတည်းဖြတ်သည်။) ။ Exodus Cry ကျူးလွန်ခဲ့သောမည်သည့်ချိုးဖောက်မှုကို RealYBOP အပါအဝင်မည်သူမျှမသိရှိပါ။
နောက်ဆုံးတွင်၊ Prause သည်သူမ၏ alias account ကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိတော့ပါ။
သူမသည်ချက်ချင်းသူမ၏ alias ကိုပြန်သွားပြီး EC သည်လိင်လူကုန်ကူးမှုကိုရပ်တန့်လိုသည်။
Pornhub ကိုပိုမိုအထောက်အကူပြုသော cyberstalking:
RealYBOP ၏ twitter သည်အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းအတွက်အမြဲတမ်းတားမြစ်ထားသောကြောင့်လူကုန်ကူးမှုနှင့် Laila များအပေါ် RealYBOP စော်ကားမှုသည်အဆုံးသတ်သွားသည်။
Nicole Prause ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအကောင့်လိုပုံပေါက်နေတယ် @BrainOnPorn ရွံရှာဖွယ်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပစ်မှတ်ထားနှောက်ယှက်ခြင်းများအတွက်ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သည်
ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်လည်းကုန်ပြီ - https://t.co/WfgWlKA1JL pic.twitter.com/577LfflIzq
- ဂယ်ရီ Wilson (@YourBrainOnPorn) အောက်တိုဘာလ 24, 2020
Epilogue: တစ် 2021 Laila Mickelwait မှ Washington Times ရှိ Pornhub နှင့်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများ (ဥပမာ RealYBOP) ၏စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောလှုပ်ရှားမှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ Pornhub ၏ခြိမ်းခြောက်မှုလှုပ်ရှားမှု၏အဆုံး။
RealYBOP“ ကျွမ်းကျင်သူ” ဒေးဗစ်လိုင်က ၂၀၂၁ ခုနှစ် PT blog post တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။Cancel Mob ရောက်လာပြီ) Pornhub ကိုကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လိင်လူကုန်ကူးမှုဗီဒီယိုများအတွက်တာ ၀ န်ယူခြင်းသည်အလုပ်ခွင်မှယဉ်ကျေးမှုများကိုဖျက်သိမ်းခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။
လူပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းအများကြီးပို စစ်မှန်သောYourBrainOnPorn- နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း